Iindaba -Uvavanyo lokuthwala ukucoca kunye nokujikeleza ngokuguqukayo
Uvavanyo lokuthintela ukujikeleza kunye nokujikeleza kokuguquguquka
Uvavanyo lokuthwala ukuCoca kunye nokuNguquguquka kokujikeleza
Umlinganiso wokucaca ngokusisigxina kwebhere yonke akukho lula. Amandla okulinganisa abangela ukuba i-ferrule kunye nomzimba oqengqelekayo kunye nonxibelelwano lwayo lukhubazeke ngokugqibeleleyo. Isixa sokushenxisa zizinto ezininzi ezibangela impazamo yokulinganisa. Inxulumene namandla okulinganisa, imeko yoqhakamshelwano kunye nezinto eziqengqelekayo. Indawo imalunga nayo.
Ukuguquguquka kokujikeleza kokuthwala kuhlolwe ngokubanzi kwindawo ethe tyaba. Ngokwesiqhelo iringi yangaphakathi ilungisiwe (okanye iringi yangaphakathi ibanjwe ngesandla), kwaye iringi yangaphandle ijikeleziswa ngesandla ukukhangela ukuba ngaba kukho isandi esingaqhelekanga kunye nokuvaleka xa ukubamba kujikeleza.
Ngokubanzi, ubude bokujikeleza bude, isitopu siyacotha, kwaye ukuguquguquka kulungile. Ngokuchasene noko, ixesha lokujikeleza lifutshane, ukumisa ngesiquphe, kwaye ukuguquguquka akulunganga. Ngenxa yeentlobo ezahlukeneyo kunye nobukhulu bezakhiwo ezithweleyo, kufanele kubekho iimfuno ezahlukeneyo zokuguquguquka kwazo. Umzekelo, iibheringi zebhola yomsinga owodwa, iibheringi zebhola enye, ngenxa yendawo encinci yokunxibelelana phakathi kwento eqengqelekayo kunye ne-ferrule, ezi iibheringi zilula xa zijikeleza, ngelixa iibheringi zemigca emibini engqukuva kunye neebheringi zokuhambisa, ngenxa ukuqengqeleka Indawo yokunxibelelana phakathi komzimba kunye nomdyarho mkhulu, kwaye ubunzima bomsesane wangaphandle mncinci. Xa ujikelezo lokuguquguquka kuhlolwe, nangona umthwalo othile wongezwa, ubungqindilili busephantsi kunelo lomqolo weralal ibhola enye.
Kwiibheringi ezinkulu kakhulu, xa zijikelezwa, akufuneki kubekho ukungqubana, kwaye isandi sokujikeleza ngokubanzi asijongwa. Ukuthwala iibheringi ezinamathambo, ezi ndlela zilandelayo zinokusetyenziselwa ukongeza ukuguquguquka kokujikeleza kokuthwala. Umsebenzi othile ulandelayo: Cinezela i-tapered bore bearing in the mandrel de kube kulayishwe umthwalo wokuqala weradial. Ngaphantsi koku kulayishwa kwangaphambili, iferrule Xa uqengqeleka, izinto ezinokuqengqeleka kufuneka zijikelezwe. Ukuba izinto eziqengqelekayo zityibilika endaweni yokujikeleza, oko kuthetha ukuba i-ferrule geometry ineziphene ezininzi kakhulu okanye ubungakanani bento eqengqelekayo ayilingani, kwaye ukujikeleza kokuguquguquka kokuthwala nako akulunganga.